प्रचण्ड नमान्दा नमान्दै आफ्नै करकापले रेणु दाहाललाई टिकट दिइएको देउवाको खुलासा – Himalaya Times ।। One of the leading Newspaper in Nepal is Himalaya times. The online portal of ehimalayatimes.com
प्रचण्ड नमान्दा नमान्दै आफ्नै करकापले रेणु दाहाललाई टिकट दिइएको देउवाको खुलासा
२३ बैशाख २०७९, शुक्रबार १८:३३
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै जोडबलमा भरतपुर महानगरमा रेणु दाहाललाई टिकट दिइएको खुलासा गर्नुभएको छ ।
आज काठमाडौंमा आयोजित पाँच दलीय गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो खुलासा गर्नुभएको हो ।
चितवनमा रेणुलाई टिकट दिँदा छोरीलाई टिकट दियो भन्ने गुनासो आउने गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘रेणुलाई टिकट नदिउँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रचण्डजी त । तर, मैले राम्रो काम गरेकोलाई किन हटाउने भनेर मेरै करकापले टिकट पाएकी हुन् ।’ ‘रेणुले भरतपुरमा राम्रो काम गरेका कारण किन हटाउनुहुन्छ ? भनेर मैले भनेको हो’ उहाँले भन्नुभयो ।
भरतपुर महानगरको मेयरमा गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । केही समय अघि चितवन कांग्रेसले कुनै पनि हालतमा भरतपुरमा कांग्रेस बाहेकलाई गठबन्धनबाट उम्मेदवार नबनाउन दबाव दिँदै आएको थियो । भरतपुरमा कांग्रेसबाट बागी उम्मेदवारी समेत परेको छ । पूर्व सांसद तथा कांग्रेस नेता जगन्नाथ पौडेलले मेयरमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।
यसैगरी सभापति देउवाले अर्को पिनि खुलासा गर्नुभएको छ । देउवाले आफ्नौ पार्टीभित्र गठबन्धनको विषयमा बखेडा झिकिरहेको समेत खुलासा गर्नुभयोे । प्रधानमन्त्री समेत रहनु भएको सभापति देउवाले गठबन्धनमार्फत चुनाव लड्न खोज्दा आफ्नै पार्टीभित्रका केहीले बखेडा झिकिरहेको बताउनु भयो ।
‘मलाई पार्टी सभापति बनाएर सर्वाधिकार दिएका छन् । केन्द्रीय सदस्यको बहुमतले पनि गठबन्धन गर्ने कुरामा सहमति जनाएको हो । अहिले किन गठबन्धन चाहिँदैन भनिरहेका छन् । हाम्रै साथीहरूले बखेडा झिकिरहेका छन्,’ देउवाले भन्नुभयो ।
काठमाडौं महानगर र चितवन महानगरमा महिला नै उम्मेदवार उठेको भन्दै उनीहरूलाई हराउने काम नगर्न सबैमा अनुरोध गर्नुभयो ।
सर्पदंशका बिरामी बढे, आइसियु
उपत्यकाका विभिन्न पाँच ठाउँमा
नेपालको एएफसी कपमा छनोट